I-China Bespoke Non Slip Socks I-Yoga Socks Cloud Design Design yeTrampoline Socks mveliso kunye nabenzi | USunnan
I-Bespoke Non Slip Socks Iisokisi zeYoga zoPapasho lweLifu iTrampoline Socks
Inombolo yomzekelo: I-SN-S1103
Igama lemveliso I-Bespoke Non Slip Socks Iisokisi zeYoga zoPapasho lweLifu iTrampoline Socks
Inombolo yomzekelo I-SN-S1103
Ukungatyibiliki Uyilo Iikawusi: Umgangatho ophezulu we-silicone crystal particles, iinyawo ezithambileyo nezingagungqiyo, ukukunika ukubambelela okuphezulu, ukuqinisekisa ukhuseleko lweenyawo, ukunyusa ibhalansi kunye nozinzo. Kulula ukunxiba nokukhusela i-ankle yakho, iinyawo zakho ziya kuzithanda iisokisi ezimtyibilizi.
Uyilo oluyimfuneko lwePremiyamu: Ezi kawusi zincangathi zibambelele kwabasetyhini nakumadoda zilungile hayi ezemidlalo kuphela kodwa zikwalungile njengeekawusi zesibhedlele, zilungele unyango lomzimba, ukhathalelo lwabantu abadala, ukukhulelwa nokunye. Ezi kawusi zigcina indawo ekhuselekileyo ejikeleze indlu, ngakumbi kubantu abadala, njengoko zinokuthintela ukuwa.
Comfortnako Izinto eziphathekayo: Ukujuluka okukhulu kwilaphu lomqhaphu wendalo kugcina iinyawo zomile kwaye zisempilweni ixesha elide. Olu luthando luqine luqinisekisa ukuba lulingana nayo yonke imilo yonyawo kunye nobukhulu, ukuvumela ukuba ufumane intuthuzelo egqithisileyo, njengolwelwesi lwesibini lolusu.
Ukuhlamba kunye nokoma: Ukuhlamba umatshini kunye nokuhlamba izandla / Musa uku-ayina / Sukuyifaka iblitshi. Ubungakanani obuphakathi kunye nezinto ezifanelekileyo eziphefumlayo kuwo onke amaxesha onyaka. Ukuqinisekisa ukuhlamba umatshini amatyeli amaninzi kwaye ayinciphisi okanye ikhubazeke.
Nobungane Inkonzo: Sizabalazela ukukunika ezona zisombululo zibalaseleyo. Siqinisekile ukuba uyakuzithanda iikawusi ezingashukumiyo kwaye ziya kukwanelisa ngokupheleleyo kuwo onke amanqaku (okwahlukileyo, umbala, isitayile, ubunzima, ubungakanani kunye nomgangatho wezinto).
Yamkela inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM: Sithumele nje uyilo lwakho okanye ilogo, sinako ukwenza uyilo lwakho, kwaye unikele ngesampulu yasimahla. Wamkelekile isampula, unxibelelane nathi ngoku nge-imeyile.
Egqithileyo Umzi-mveliso oQhelekileyo waBantwana weCotton esendlwini yokuTyibilika kwiTrumpoline Grip Socks
Okulandelayo: Umgangatho oPhezulu weFektri yoThungelwano oluSebenzayo oluSebenzayo